Ciidamo gaar oo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya oo la geeyay garoonka C/laahi Yuusuf ee Gaalkacyo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamo gaar oo ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya oo la geeyay garoonka C/laahi Yuusuf ee Gaalkacyo
Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in ciidamo gaar ah oo ka tirsan kuwa Kumaandooska Soomaaliya ee loo yaqaano Danab la geeyay garoonka diyaaradaha ee C/laahi Yuusuf, halkaasi oo dhowr jeer hore ay ku dagaalameen maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamadan oo ay tababareen saraakiil Mareykan ah ayaa tiradooda lagu sheegay inay gaareyso ilaa 200 askari, waxaana ilaa iyo haatan la ogeyn uljeedka rasmiga ah ee loo geeyay garoonka magaalada Gaalkacyo.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in ciidankaasi ay qeyb ka yihiin howlgal balaaran oo ciidanka AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ka fulinayaan gobolada Mudug iyo Galgaduud.
Warar kale ayaa sidoo kale sheegaya ina ciidamadaan ay xal u yihiin khilaafkii ka taagnaa garoonka Gaalkacyo oo ay isku heysteen labada maamul ee Galmudug iyo Puntland, waxaana la sheegay in ciidankaasi ay sugi doonaan ammaanka guud ee garoonkaas.
Dhinaca kale, ciidamada Kumaandooska ee la geeyay magaalada Gaalkacyo ayaa durbadiiba fariisimo waaweyn ka sameystay garoonka diyaaradaha ee C/laahi Yuusuf, waxaana sidoo kale hakad galay diyaaradihii tegi jiray garoonkaas.
Ilaa iyo haatan dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland weli wax war ah kama aysan soo saarin dhaq-dhaqaaqyada ciidamadaan, xilli madaxda madasha wada-tashiga qaran uu shir uga soconaayo magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga ilaa inta xilli ay ciidankaasi kusii sugnaan doonaan garoonka diyaaradaha C/laahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo, iyadoona garoonkaasi uu mudooyinkii ugu dambeeyay howlihii shaqo ee ka jiray garoonkaasi ay gaabis noqdeen.